5 Su'aalood oo ku saabsan Jerry - Website-ka rasmiga ah ee CHPW Website-ka blog ee rasmiga ah ee CHPW | Awooda bulshada Barta rasmiga ah ee CHPW
Community | 5-kii Maajo, 2022
La dhajiyay May 5th, 2022 - Waqtiga Akhriska: 4 Daqiiqad / s
La kulan Jerry Perez, Maamulaha Gobolka ee Waqooyiga Bartamaha Washington.
Jerry waxa uu jecel yahay ka-qaybgalka iyo samaynta isku xidhka. Waanu la fadhiisanay si aanu u ogaano waxa ka socda gobolka (Waqooyiga dhexe ee Washington).
"In aan fursad u helo inaan taageero baahiyaha caafimaad ee gaarka ah ee bulshada waxaan ugu yeeraa guriga anigoo ka faa'iideysanaya khibradeyda daryeel caafimaad ee hore iyo xiriirka bulshada waa mid aad u faa'iido badan. Si dhow ula shaqeynta dadka deegaanka waxay ii ogolaataa inaan gacan ka geysto dadaallada bulshada ee socda ee CHPW. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo kooxda Maamule Goboleed ee cajiibka ah oo qiimeeya xidhiidhka ka dhexeeya Caafimaadka Bulshada
Xarumaha iyo bixiyeyaasha caafimaadka si ay si fiican u fahmaan walaacyada caafimaadka xubnaha."
- Jerry Perez, Maamulaha Gobolka, Isku dhafka Nidaamyada Gobolka, Waqooyiga Bartamaha ee Gobolka Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington
Mudo intee le'eg ayaad lajirtay Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington maxaana tahay doorkaaga hada?
Waxaan bilaabay sanadkan aniga oo ah Maareeyaha Gobolka ee Waqooyiga iyo Bartamaha Gobolka Washington, oo ay ku jiraan Chelan, Douglas, Grant, iyo Degmooyinka Okanogan.
Anigu waxaan ahay qayb ka mid ah Kooxda Isku-dhafka Nidaamyada Gobolka. Qayb ka mid ah waxa aanu samayno waa u shaqaynta sidii xidhiidhiye goboleed oo u dhexeeya Xarumaha Caafimaadka Bulshada iyo bixiyeyaasha caafimaadka haddii ay jiraan su'aalo ama jawaab celin. Waxaan sidoo kale ka qayb galnaa munaasabadaha bulshada si aan u barano baahiyaha maxalliga ah iyo fursadaha iskaashiga. Ka dib waxaan isku dubbarideynaa taas dhabarka CHPW.
Marka la soo koobo, waxaanu nahay indho indho oo si feejigan u ilaalinaya goboladeena, taageerana hirgelinta daryeelka la maareeyo ee IMC, una ololeeya xubnaha.
Ka warran sharraxaadda shaqada ama CHPW ayaa kugu dhiirigelisay inaad codsato doorka?
Waxaan la wadaagi doonaa jawaabta "khatar" oo ay weheliso jawaabta "madadaalada" Waxa aan ku jiray daryeel caafimaad todoba sannadood, intii aan jidka ku jiray, waxa aan wax yar ka bartay Apple Health iyo baahiyaha daryeelka caafimaad ee gaarka ah ee soo food saaray dadka Waqooyiga Dhexe ee Washington. Markaa markii saaxiibkii hore uu wadaagay jagadan Maareeyaha Gobolka, waxaan mooday inay ii ogolaanayso inaan sii wado caawinta bulshooyinka aan guriga ugu yeedho.
Jawaabta madadaalada leh, waxaan ahay taageere weyn oo sitcom ah Xafiiska. Waxay i dhibaysaa in aan la wadaago magac shaqo Michael Scott, oo ah Maamulaha Gobolka.
Waxay ku bilaabatay si aan dambi lahayn. Waxaan dhawaan dhammeeyay shahaadada Master of Law iyo Justice ee Jaamacadda Bartamaha Washington, waxaan arkay qaddarka deynta ardayga ee baaxadda leh, oo waxaan ogaaday inaan u baahanahay inaan shaqada galo. Waxaan arkay xidhiidh adag oo ka dhexeeya cadaaladda dembiyada iyo caafimaadka habdhaqanka, markaa markii aan arkay boos shaqo oo loogu talagalay booska Taageerada Xafiiska ee Shabakadda Taageerada Gobolka ee Chelan/Douglas (RSN), waan dalbaday. Waxaan dareemay inaan nasiib u yeeshay shaqada oo aan ku faraxsanahay fursadda. Doorkaas, waxaan si joogta ah ula hawlgalay bixiyayaasha iyo daneeyayaasha bulshada. Saddex sano ka dib, waxaa i shaqaaleysiiyay Beacon Health Options si aan u horumariyo cilaaqaadkaas si baaxad weyn anigoo ah Isku-duwaha Ka-qaybgalka Bulshada.
Waxa ugu xiisaha badan ee ku saabsan in aan ku jiro daryeelka caafimaadka waa marka xiddiguhu isla jaan qaadaan, oo barnaamij ama adeeg cusub la bilaabo!
Maxay tahay wax aad dhawaan baratay ama aad dhammaysay oo aad ku faanto?
Doorkeygii hore ee Beacon Health Options, waxaa jiray laba mashruuc oo aan runtii ku faanay in aan qayb ka noqdo. Mid waa Barta Saddexaad ee Waqooyiga Bartamaha Washington, barnaamij taageero oo loogu talagalay dhalinyarada LGBTQ+ oo ay iska kaashanayaan Bulshada Guriga Carruurta. Barnaamijku waxa uu bixiyaa meel nabdoon oo lagu sameeyo xidhiidho togan, lagu helo taageero, oo wax lagaga barto ilaha bulshada. Kooxdaydu waxay gacan ka geysatay maalgelinta barnaamijkan, kaas oo lagu qaabeeyey barnaamij la mid ah gobolka Koonfur-galbeed ee Washington, ee gobollada Chelan, Douglas, Grant, iyo Okanogan.
Mashruuca labaad wuxuu ahaa bixinta maalgelinta Waqooyiga Bartamaha Washington Naloxone Mashruuca Mashiinnada Iibka iyada oo lala xisaabtamayo Waqooyiga Dhexe ee Bulshada Caafimaadka iyo Shabakadda Tababarahooda Soo kabashada. Heerarka xad dhaafka ah ee xad-dhaafka ah iyo baahida loo qabo habka hoose ee xannibaadda si loogu qaybiyo naloxone bulshada dhexdeeda, mashruucan mashiinka iibinta ayaa ujeedadiisu tahay in la yareeyo xad-dhaafka opioid waxaana rajeyneynaa in lagu xiro xubnahan bulshada daaweynta muddada dheer.
Haddii aad leedahay booqdayaal ka yimid magaalada dibaddeeda xaggee jeceshahay inaad u kaxayso si ay ula kulmaan Pacific Northwest?
Waxaan ku noolahay Wenatchee, oo aan u arko inay tahay albaab laga galo Cascades ama Bariga Washington. Waxaan u maleynayaa haddii aad rabto inaad dhadhamiso Cascades-ka, waxaan ku dhiirigelin lahaa inaad booqato Leavenworth, magaalada Bavarian-mawduuca leh oo leh cunto dhadhan fiican leh iyo indho-indhayn iyo socod dheer.
Dhanka Bari ee Washington, waxaan ku dhiirigelin lahaa socodka Saddle Rock/Labada Bears. Shirku wuxuu bixiyaa aragti heersare ah Dooxada Wenatchee.
Ogeysiinta Qolka Saxaafaddafurayaa faylka PDF
« Daryeelka Ka Hortagga ah - Waa maxay sababta aan u daryeelo?
Saddex Talooyin oo loogu talagalay Hooyooyinka Cusub: Maareynta Cadaadiska Dhalmada Kadib & Xoojinta Caafimaadka Maskaxdaada »